Ini Ndinogadzira Sei Mapurogiramu eApple MuAlfabheti Order? Iyo Inokurumidza Kugadzirisa! - Iphone
iphone wont batidza yakanamatira pane apple logo
maitiro ekubatanidza yako iphone kune yako mota bluetooth
yakatsemuka iphone 6 screen kugadzirisa
Ini Ndinogadzira Sei Mapurogiramu eApple MuAlfabheti Order? Iyo Inokurumidza Kugadzirisa!
Iyo yekumba chidzitiro pane yako iPhone yakashata uye isina kurongeka uye iwe wagadzirira kuzvichenesa. Nekudaro, iwe haudi kushandisa zuva rese zvinonetesa uchidhonza maapps kutenderedza Home skrini. Muchikamu chino, ndichakuratidza maitiro ekuronga maapplication eAppfabheti akarongeka nekukurumidza uchishandisa Reset Home Screen Layout !
Chii chinonzi Reset Home Screen Layout Pane iPhone?
Dzorerazve Home Screen Layout inogadziridza yako iPhone's Home skrini kune yayo fekitori dhizaini. Izvo zvakavakirwa-mukati maapplication e iPhone zvichave zvakarongeka chaizvo kuti vanga vari sei pawakatanga kubatidza yako iPhone uye chero maapplication awakadhonza kubva kuApp Store anozoiswa mune alfabheti.
Yekukurumidza Disiki Nezve Iyi Nzira
Ndisati ndafamba newe nenzira yekuronga yako maapplication eAppfabheti, zvakakosha kuti iwe uzive kuti ucharasikirwa neese ako maforodha eapps nekutevera nzira iripazasi. Nekudaro, kana iwe usiri kuda kurasikirwa neakasarudzika maforodha iwe awakagadzirira ako maapplication, iwe uchafanirwa kuronga manyore ako maapplication eAppfabheti.
sei yangu iphone skrini yakasviba
Kechipiri, iyo yakavakirwa-mukati maapplication eApple akadai seSafari, maNotes, uye Calculator haigadziriswe nearufabheti . Iyi nzira inozoita chete alphabetize maapplication awakadhonza kubva kuApp Store.
Maitiro Ekuronga iPhone Mapurogiramu MuAlfabheti Order
Kutanga vhura iyo Zvirongwa zveapp pane yako iPhone uye tap general . Wobva wadzvanya Dzorerazve -> Gadziridza Kumba Screen Kurongwa .
Paunovhara kunze kweiyo Zvirongwa app, iwe uchaona kuti ako maapplication akarongeka alfabheti!
verizon isina waya zvirongwa zvitsva 2016
Sezviri Nyore SaABC
Maapps ako izvozvi akarongeka maererano nearufabheti pane yako iPhone uye uchave uine nguva iri nyore yekutsvaga iwo aunoda kushandisa. Goverana ichi chinyorwa pasocial media kudzidzisa yako mhuri uye shamwari maitiro ekuronga maapplication eAppfabheti akarongeka futi!